Kusoo Biir - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka
Bogga ugu weyn/Ku biir
Waxaan nahay dadaal dadku ku dheehantahay gurmad. Haddii aan sugno dowladda ama hay'adaha kale ee waaween, waxaa laga yaabaa inaan ka badbaadi karno biyaha daadadka ee ku hanjabaya inay dhammaanteen ina wada qallalaan. Anagu dadka waa inaan is caawino.
Diyaar ma u tahay ku biirida safka hore ee dhaqdhaqaaqa cadaalada cimilada? Fiiri baakadayada soo dhaweynta:
Xirmooyin Gargaar Musiibo oo Gargaar Degdeg ah ah
Waxa kale oo aad iska qori kartaa cusboonaysiinta e-maylkeena adigoo raacaya link this.
Wixii ku saabsan dadaallada jawaab celinta Duufaanta Laura, buuxi foomkaan iskaa wax u qabso ah si aan ugu xirnaano dadaalkeena gargaarka SW Louisiana.
Miyaad heshay xirfad ama xiise (naqshadeynta garaafka, xisaabinta, shaqada dhirta, nijaarnimada, la talinta, iwm) oo aan rabo inaad u adeegsato dhinaca aasaaska aasaasiga ah dadaalka gargaarka musiibada? Noo sheeg!
Is-xilqaan guud iyo bilaabida howsha kugu xirida is abaabulka socda Mucaawinada Gargaarka Musiibada, waxaad email noogu soo diri kartaa [emailka waa la ilaaliyay] inaad na soo ogeysiiso sida aad rabto inaad uga qeybqaadato.
Intaa waxaa sii dheer, waa lagusoo dhaweynayaa inaad hubiso kuweenna is caawinta, jawaabta musiibada, daryeelka wadajirka ah, iyo wada-shirqoolayaal qaybo ka mid ah degelkeenna si aan u aragno siyaabo dheeri ah oo looga qayb qaadan karo dhaqdhaqaaqa ballaaran ee gargaarka isxoreynta iyo ka jawaab celinta musiibada oo aan kaliya ka nahay qayb yar.
Goobaha Musiibada ee Ps waxay leeyihiin awood ay ku ahaadaan asal ahaan badbaado la'aan. Waxay ku jiri karaan hanjabaado jireed oo caafimaadka iyo jirka ah, jahwareer xagga shucuurta ah, iyo cilaaqaad bulsheed murugsan ama kala daadsan. Waxaan ka codsaneynaa qof kasta oo ku lug leh ka jawaabidda musiibada bulshada, tabaruceyaasha maxalliga ah iyo kuwa aan maxalliga ahayn, iskuduwayaasha, iyo xubnaha bulshada ee kaqeyb galaya- inay noqdaan kuwo firfircoon abuurista jawi taageero leh halkaasoo labadaba la hubiyo lana ansaxiyo nabadgelyada jir ahaaneed iyo tan shucuurba. Xaaladda kacsan, culeyska fekerka sare leh ee musiibada, halkaas oo dadku ku kulmaan meel ka baxsan xiriirka bulshada ee caadiga ah, way fududahay in si qaldan loo fahmo midba midka kale. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la noqdo si cad oo taxaddar leh xaqiijinta dhamaan xiriirada aan wada leenahay waa mid la isku raacsan yahay
Tabaruciinta iyo kaqeybgalayaasha bulshada ayaa si wada jir ah uga wada shaqeeya aasaaska wadajirka, oggolaanshaha firfircoon.
Dhammaan tabaruceyaasha iyo kaqeyb galayaasha bulshada waa iney xushmeeyaan xuduudaha jirka iyo galmada ee dadka kale.
Weydiiso ogolaansho afka ah oo cad ka hor intaadan qof taaban. Oggolaanshaha waxaa ku jira weydiinta, dhageysiga, iyo ixtiraamka; kuma jiraan khasab, waxyaabaha laga filayo, ama male awaal.
Marna ha u qaadan ogolaanshaha, gaar ahaan haddii isticmaalka maandooriyaha / qamriga ay ku lug leeyihiin. Dadka aadka u sakhraansan waxaa marwalba loo arkaa inay yihiin kuwo aan ogolaan.
Dembiilayaasha rabshadaha galmada iyo kadeedka laguma soo dhoweynayo meelaha tabaruca ah iyo nashaadaadkooda waxaana la weydiisan doonaa inay ka baxaan meelahaas iyo nashaadaadkaas. Rabshada galmada ee tabaruce ayaa sabab u ah in si dhakhso ah loo joojiyo xiriirka mutadawiciinta ee Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid.
Joogitaanka dambiilayaashu waa inaysan hor istaagin ka-qaybgalayaasha badbaada ee howlaha iskaa wax u qabso. Gargaarka Musiibada ee Is-kaashatada waxay ku martiqaadeysaa badbaadayaasha inay la xiriiraan Garyaqaannada Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid Ellen Zitani ama Stephen Ostrow si ay ugala hadlaan sida aan kuu taageeri karno Nambarada taleefannada ee lagu qariyey internetka si gaar ah. Email [emailka waa la ilaaliyay] in lagu xidho Ellen ama Stephen.
Tabaruceyaasha iyo xubnaha bulshada waxay xaq u leeyihiin inay ka baxaan xaaladaha ay dareemayaan khatar. Waxaan la shaqeyn doonnaa dadka si aan isugu dayno inaan u helno waxyaabo kale oo ay nabadgalyo ku dareemaan.
Ka gaabinta ixtiraamka tilmaamahan iyo xad gudubyada kale ee foosha xun ee mutadawiciinta ama badbaadada bulshada waxay ku dambayn kartaa "kala furfurnaan" qofka ku xadgudbay dhammaan goobaha gargaarka musiibo ee Mutual Aid, oo ay ku jiraan guryo mutadawiciin ah, dhibco qaybinta, goobaha shaqada, ama nashaadaadyada kale ee howlaha iyo ilaha kale. . Halkan guji si buuxda Xeerka anshaxa musiibo ee Musiibada ee Dhaqanka.